PressReader - Isolezwe: 2017-10-12 - Uqubelani usuqashiwe ungawukhokheli uNSFAS?
Uqubelani usuqashiwe ungawukhokheli uNSFAS?
NGOLWESIBILI inhlangano kahulumeni eboleka abafundi imali yokufunda emanyuvesi, iNational Students’ Financial Aid Scheme (NSFAS), ithe ikweletwa uR10.1 billion. Kule mali uR6.1 billion ongakhokhiwe wawubolekwe ngabafundi asebazithola iziqu zabo bese kuthi uR4 billion owawubolekwe yilabo abagcina bengaziphothulanga izifundo zabo.
Ngokwezibalo zakamuva bangu-123 512 abafundi abashiya phakathi izifundo zabo abakweleta uR4 billion. Ngokomthetho wale nhlangano, umuntu kufanele aqale ukukhokhela uNSFAS uma esehola ngaphezu kukaR30 000 ngonyaka.
Ukuntuleka kwemisebenzi ikakhulukazi entsheni emnyama ngenye yezinselelo ezinkulu izwe elibhekene nazo njengoba imisebenzi ekhona ingaphansi kwesibalo sabantu abadinga ukuqashwa.
Lokhu-ke kufanele ukuthi kunomthelela ekutheni abanye abantu bangayikhokhi imali ikakhulukazi labo asebathweswa iziqu zabo. Nakubona laba abagcina bengaqedanga cishe bayingxenye yalaba okuyaye kuthiwe sebephelelwa wumdlandla wokufesa.
Siyabaxolela-ke laba abangakhokhi ngoba bengenayo imisebenzi. Kodwa labo asebesebenza futhi abahola ngaphezu kukaR30 000 ngonyaka njengokokunquma kukaNSFAS kodwa abaqubisile nje bengakhiphi ngisho isenti leli, banehlazo futhi bazicabangela bona bodwa.
Uma uthule nje ekubeni usungakwazi ukukhokha usuke ucabanga ukuthi sekwanele ngokuthi kusizakale wena kodwa abanye abantu akufanele bona basizakale ngoba phela le mali ekhokhwayo yiyona ephinde yelekelele abanye abafundi nabo abaludingayo usizo njengoba nawe wake waludinga.
Kuyajabulisa ukuzwa ukuthi uNSFAS uyasebenzisana nabaqoqi bentela, uSARS ukuze kuzobanjwa labo abaqubile ekubeni sebeqashiwe futhi engathi ungangaba namusa uma usubatholile, uvele uwundule yonke imali ekwi-akhawunti yomuntu yikhona abantu bezoyeka ukuzicabangela bodwa.
Ake sibagqugquzele abantu esibaziyo abakweleta uNSFAS abasebenzayo ukuthi abakhokhe, izwe lizoya phambili uma sicabangelana hhayi ukuba ngogombela kwesakhe.